Nahazo fanavaozana vaovao ny Samsung Gear S3 izay ahafahantsika mamaly antso amin'ny alàlan'ny famadihana ny satroboninahitra | Androidsis
Nahazo fanavaozana vaovao ny Samsung Gear S3 izay ahafahantsika mamaly antso amin'ny alàlan'ny famadihana ny satroboninahitra
Hatramin'ny nanombohan'ny Samsung ny taranaka faharoa an'ny Gear S2, maro ireo, na ny haino aman-jery na ireo mpampiasa mihitsy, izay nanaiky fa ity maodely ity smartwatch tena tsara izy io, tsy ho an'ny famolavolana azy ihany, fa amin'ny asany ihany koa, ireo safidy atolotra antsika sy ny fampiharana ny satroboninahitra mihodina, izay hialantsika amin'ny fikasihan-tanana amin'ny efijery.
Hatramin'ny nanombohany, Samsung dia nandefa kinova telo an'ny Gear S, izy rehetra miaraka amina lahasa vaovao marobe, izay tsy azo eritreretina akory ny sasany. Na izany aza, toa tsy izy ireo no tokony ho izy rehetra, satria vao avy nandefa fanavaozana vaovao ny firenen-kafa Koreana, fanavaozana mamela antsika valiny antso amin'ny famadihana ny satro-boninahitra.
Mahagaga fa tsy nieritreritra ny hampihatra an'io asa io ny orinasa tao anatin'ny telo taona nijanonan'ny terminal teny an-tsena, saingy hoy ny ohabolana hoe: aleo tara noho izay tsy nisy. Ity fomba vaovao hamaliana antso ity, dia ampandehanana an-tanindrazana aorian'ny nahazoany ny fanavaozana ny terminal, ka tsy mila manao na inona na inona mihitsy isika hampavitrika azy, izay mety hanjary olana raha tsy te-hamaly antso isika fa kosa mifanerasera tsy fanahy iniana miaraka amin'ilay satro-boninahitra. Avy amin'ny sehatry ny smartwatch dia afaka manafoana io safidy io isika.
Ity fanavaozana ity dia azo alaina ho an'ny Gear S3 Frontier sy ny Gear S3 Classic. Ireo laharan-tariby dia Sary R770XXU2CRE3 y Sary R760XXU2CRE3 tsirairay avy. Ny lanjan'ity fanavaozana ity dia eo ambanin'ny 14 MB ary azontsika atao ny misintona azy avy amin'ny fampiharana Samsung Gear amin'ilay fitaovana nampifandraisintsika, tamin'ny alàlan'ny About Gear> Fanavaozana ny lozisialy. +
Ity fanavaozana vaovao an'ny Tizen ho an'ny Gear ity dia manamafy indray fa na dia toa manondro izany aza ny zava-drehetra ny Gear S4 dia ampiasan'ny Android Wear, angamba noho ny hetsika ara-barotra teo anelanelan'ny Google sy Samsung, mba hanamafisana ny varotra smartwatches tantanan'ny Wear OS, satria na ny orinasa koreana miaraka amin'i Tizen aza dia mivarotra singa betsaka noho ny mpanamboatra smartwatches rehetra miaraka amin'ny Wear OS mitambatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nahazo fanavaozana vaovao ny Samsung Gear S3 izay ahafahantsika mamaly antso amin'ny alàlan'ny famadihana ny satroboninahitra
Ny OnePlus 6 dia novohana tamin'ny sary tsotra an'ny tompony